आइसोलेसन बस्दा खाना र स्वास्थ्यमा कसरी ख्याल गर्ने ? « Drishti News – Nepalese News Portal
२५ बैशाख २०७८, शनिबार 11:35 am
काठमाडौं – नेपालमा हाल कोरोना दोस्रो लहर आएसँगै संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्यादर बढ्दो छ । यसबीच सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लासहित देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
दैनिक हजारबढी संक्रमितको संख्या थपिएसँगै सरकारले समेत केही गतिविधिमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था सुरु गरेको हो । गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि अस्पतालको अभावले होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । तर घरमा नै आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूले कस्तो कुरामा ध्यान दिने ?
चिकित्सकहरू गम्भीर समस्या देखिएका बाहेक लक्षण नदेखिएका र सामान्य लक्षण देखिएकालाई समेत घरमै आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिन्छन् । घरमै बस्दा खाना र सुरक्षाको बारेमा राम्रो ध्यान दिनु आवश्यक रहेको चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।